/ Ungahambisa kanjani noma ukopishe amafayela noma amafolda ku-Linux? | Kusuka kuLinux
/ Ungahambisa kanjani noma ukopishe amafayela noma amafolda ku-Linux?
Abaningi bethu uma kungeyona ingxenye enkulu kunazo zonkesijwayele ukusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza noma imvelo yedeskithophu ukusho. Imisebenzi yokuhamba, ukuhlela, Qamba kabusha phakathi kwezinye izinto amafayela noma amafolda zivame ukwenziwa ngendlela elula ngokuchofoza nje okumbalwa.
Kodwa kwenzekani lapho kufanele usebenzise lokhu kunyakaza kuseva ngoba iningi lazo livame ukuphathwa kuphela kusuka kukhonsoli yomyalo, lokhu kuvame ukuhlala kumaseva azinikezele, noma kunjalo akukaze kubuhlungu ukwazi ukuthi lokhu kwenziwa kanjani ngoba ngeke wazi ukuthi kungaba matasa nini.
Kwenzeke kimi ukuthi kwezinye izikhathi ngilahlekelwe yimvelo yami yokuqhafaza futhi kufanele ngisebenzise ikhonsoli ukuyibuyisa, kepha lelo elinye iphuzu.
Usuku lwa namuhla ngiza ukwabelana nawe ngemiyalo elula ezosisiza ukwenza imisebenzi yokukopisha noma yokuhambisa amafayela.
1 / Ungawahambisa kanjani amafayela noma amafolda ku-Linux?
2 Ungawakopisha kanjani amafayela ku-Linux?
/ Ungawahambisa kanjani amafayela noma amafolda ku-Linux?
Into yokuqala kuzoba ukuphela okuzoba yithuluzi lethu elizosisiza kukho konke lokhu, into yesibili ukudala amanye amafolda anemibhalo yombhalo ngaphakathi lokhu ukuze kungalimazi noma kulahle imininingwane.
Into ejwayelekile kakhulu ukuhambisa ifayili lesikhombi ngalokhu sizosebenzisa umyalo we-mv:
Nakhu esikwenzayo kususa ifayili.txt kufolda yokuhlola esefolda yethu yemibhalo. Ngenxa yalokhu sibheka ukuthi njengamanje sibekwe enkombeni lapho kutholakala khona ifayili.txt
Lapho sifuna ukuhambisa amafayela angaphezu kwelilodwa ngasikhathi, uhlobo lwe-syntax kungaba okulandelayo:
Manje okuthile okuwusizo kakhulu ukusebenzisa i- * lapho amafayela anesisekelo esifanayo egameni, ngokwesibonelo:
Umshayeli we-Amd ...
Ngakho-ke, njengoba sibona, banesisekelo esifanayo se- "AMD" sokuhambisa wonke lawo mafayela anegama lesisekelo elifanayo, senza okulandelayo:
Okufanayo kusebenza kuwo wonke lawo mafayela anohlobo olufanayo, ngokwesibonelo, .doc, .xls, .deb, .rpm njll. Ukuzihambisa sisebenza kuphela
Kuze kube manje kucacile ukuthi isebenza kanjani nokuthi singawenza kanjani umsebenzi ngezindlela eziningana, kepha kwenzekani lapho sifuna ukuhambisa yonke into enesiqondisi, amafayela namafolda angaphansi.
Kulokhu sizosebenzisa i- *, ngokwesibonelo, ngifuna ukuhambisa konke engikucindezele kusuka ku-wordpress kuye kwizikhombisi ezimbili ezedlule:
Ukwazi okwengeziwe ngomyalo esingawusebenzisa umuntu wawo noma nge --help parameter, lapha sizobona yonke imingcele yayo.
Ungawakopisha kanjani amafayela ku-Linux?
Ngaleli cala icishe ifane ngokungafani nalokho, ukuhambisa amafayela noma amafolda usuka komunye uye komunye, lapha gcina amafayela namafolda endaweni yawo avela kuyo bese wenza ikhophi enkombeni ekhethiwe.
Un umyalo olula wokukopisha ifayela noma ifolda kusuka kwesinye isiqondisi kuya kwesinye:
Indlela ecacile yokuyibuka:
Lo myalo uvame ukusetshenziswa kakhulu ukwenza izipele zefayela noma ifolda ezohlelwa, ngoba idala ikhophi eliphelele, kepha ngegama elihlukile, isibonelo esisebenzayo:
para kopisha amafayela amaningi noma amafolda:
Manje uma sifuna ukukopisha konke okuqukethe ifolda lapho sibekwe khona komunye umkhombandlela:
Manje uma sifuna ukukopisha umkhombandlela kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye
Kubalulekile ukuthi sibe sezingeni elilodwa ngaphansi komkhombandlela esizowukopisha, ngoba uma singaphakathi kuwo kudingekile ukucacisa indlela ephelele, ngoba uma sibeka umyalo ngendlela engiwubeke ngayo, kuzokwakha umkhombandlela ongenalutho kuphela.
Ekugcineni, uma sifuna ukwazi yonke imingcele yayo, sincika kumuntu waso noma nge - usizo
Ngaphandle kokuqhubeka kokunye, kuyimiyalo eyisisekelo ngokweqile, ukusetshenziswa kwayo kungakusiza kakhulu futhi kufanele uqaphele nakubo ngoba kuhlala kunconywa ukusebenzisa ifomu eliphindayo, elisetshenziswa ne -r ipharamitha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » / Ungahambisa kanjani noma ukopishe amafayela noma amafolda ku-Linux?
UJorge C Rodriguez S kusho
Uma ngifuna ukukopisha wonke amafayela kusuka kufolda eyodwa kuya kwelinye kuzoba lapho
cp / * / igama / ifolda / indawo oya kuyo ??
ngimi kufolda lapho nginamafayela engizowakopisha khona?
Phendula uJorge C Rodriguez S
UJuan Manuel Carrilllo Campos kusho
Ngifuna ukukopisha inani elithile lamarekhodi kusuka kufayela lomthombo liye kufayela lokuya khona, kwesinye isikhathi lirekhodi-kusuka kwirekhodi-kuya kububanzi, ngingakwenza kanjani lokhu?
Phendula uJuan Manuel Carrilllo Campos
Kuyini ukushintsha ku-Linux nokuthi ungayisebenzisa kanjani?